Ọdọ mmiri ọdọ mmiri Nkwado - Ọdọ mmiri
Ndụmọdụ Ọdọ Mmiri Swimmimg
Anyị na-akọrọ ahụmịhe anyị na etu esi eme
Anyị nwere ihe karịrị afọ 25 nke ọkachamara ahụmahụ na ihe e kere eke, imewe, ewu ma ọ bụ ntaghari ohuru nke igwu mmiri oru ngo gburugburu ụwa. Anyị nwere ike ịnwe ikpe na Europe, Middle East, Asia na Africa maka nrụtụ aka gị.
Anyị na-enyekarị ngwọta kacha mma na nke akụ na ụba dabere na ọnọdụ mpaghara.
N'ezie, ihe ọmụma anyị banyere ịwu mmiri ọdọ mmiri na gburugburu ụwa na-enye anyị ohere ịnye ndụmọdụ na nhọrọ kachasị dị mma. Design echiche, Eserese na nkọwa, teknuzu aro, ọkachamara ihe ọmụma ... N'agbanyeghị ihe ajụjụ ị nwere, biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Otu anyị nwere ike isi nyere gị aka
Maka anyị, iwu nke ọdọ mmiri gị agaghị akwụsị mgbe ịmechara atụmatụ nna ukwu na ngalaba ma ọ bụ eserese hydraulic.
N'ime afọ 25 gara aga, anyị arụ ọrụ na mpaghara dị iche iche nke ụwa, na ọkwa teknụzụ nke mpaghara dị iche iche. Anyị enwetawo ọtụtụ ahụmahụ n'ịnagide nsogbu dị iche iche. Ahụmịhe a na-enyere anyị aka ịdụ gị ọdụ na akụrụngwa kwesịrị ekwesị taa ma nye gị enyemaka dịpụrụ adịpụ n'oge ọrụ ebe a na-egwu mmiri.
Dabere na ihu igwe na iwu mpaghara, anyị na-akwado ngwa kachasị mma maka gị.
Mgbe ụfọdụ ọ na-esiri ike ịkọwara ndị omenkà ma ọ bụ ndị na-ewu ụlọ ihe a tụrụ anya n’aka ha. Anyị nwere ike inyere gị aka ma ọ bụ mee ya maka gị.
Nlekọta ebe owuwu
Ọ dịghị mkpa ịga njem maka nke a, ebe ọ bụ na foto na vidiyo zuru ezu maka anyị ịchọpụta mmezi nke ọrụ ahụ wee chetara gị mgbe ọ dị mkpa
Anyị aro ga-enyere gị dozie kasị nkịtị nsogbu kpatara imewe njehie ma ọ bụ ọdọ mmiri ịka nká.
Akụkọ nsogbu dị ugbu a
Nke a bụ akụkọ na-egosipụta nsogbu ndị dị ugbu a ma na-atụpụta azịza
Ntuziaka iwu ma ọ bụ mmezigharị
Owuwu ma obu mmeghari ohuru, anyi ga eduzi gi ichota ihe kacha mma.
Ntuziaka atụmatụ ụlọ
Anyị na-egosi gị otu esi edozi nsogbu ahụ.
Anyị ga-agwa gị nhọrọ nke kachasị mma maka ọnọdụ gị.
Nyere aka wulite ọdọ mmiri gị.
Igwu Mmiri Pool, Igwu Pool Ngwọta, Ọrụ Igba mmiri, Igha mmiri nke Ọha, Rooftop Pool Ngwa, Igwu Ulo Okpu,